देउवाको सबैभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धी म नै हो : डा. कोइराला - मध्य पहाड
Posted on २७ आश्विन २०७८, बुधबार १६:३१ - २७ आश्विन २०७८, बुधबार १६:३१ by मध्यपहाड संवाददाता
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको रोकिएको प्रक्रिया तिहार लगत्तै सुरु हुने बताएका छन्। आज यहाँ पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले विवाद रहेका १३ जिल्ला सहित अन्य रोकिएका जिल्लाको समेत तिहार लगत्तै अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका हुन्।
← मुगु बस दुर्घटना : मृत्यु हुनेहरु अधिकांश दसैँमा घर फर्किएका विद्यार्थी
नेपाल इतिहास रच्न आतूर, प्रशिक्षक अल्मुताइरीको ‘अग्नि–परीक्षा’ →